सरकारी बैंकलाई प्रोत्साहन गर्न सांसदहरुको माग : पुरा पढ्नुहोस । | Everest Online News
Reporter: Everest Online News Kathmandu, Sansad
२९ फागुन २०७५ काठमाडौं ।बुधवार बसेको संसदमा सांसदहरुले आफ्नो तलब भत्ता सरकारी बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन संसद सचिवालय र सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको प्रश्नोत्तरमा सांसदहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले यो विषयमा संसद सचिवालयलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेकाछन ।
नेकपा सांसद मिना पाण्डेले संघीय संसदबाट पाउने सेवा सुविधा सरकारी बैंकमा राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारको कार्ययोजना के छ भनी प्रश्न गरिन् ।
हाल सांसदहरुले एभरेष्ट बैंकमार्फत तलब भत्ता लिँदै आएका छन् । सांसद पाण्डेले सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंक खोल्ने विषयमा पनि सरकारको योजना माग गरिन् ।
नेकपा सांसद भीम रावलले सरकारी लगानीका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफूलाई सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न नदिएको सार्वजनिक रुपमै गुनासो गरेको भन्दै किन निजी बैंकलाई मात्र प्रोत्साहन दिएको भनी प्रश्न गरेकाछन् ।
सांसद सुजिता शाक्य खगराज अधिकारीले सांसदहरुको तलब विदेशी संयुक्त लगानीको बैंकमा नभई सरकारी बैंकमा राख्न पाउनुपर्छ भनेर पटक पटक माग गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताएकाछन ।
सांसद सुजिता शाक्यले सांसदको तलब भत्ता सरकारी बैंकमै राखेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसदहरुले सरकारी कारोबारहरु स्थानीय तहसम्मै सरकारी बैंकमै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
डा. अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरुले भनेको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिन संसद सचिवालयलाई गरेका छन् ।
यदि कुनै माननीयले आफ्नो खाता कुनै तोकिएको बैंकमा बैंकमा खोल्छु भन्नुहुन्छ भने त्यही खातामा पैसा जम्मा गरिदिनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छर त्यसो गर्नु पर्छ भनेका छन् ।
हरेक सरकारी निकाय यसै गरी चलिआएको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।